FANOLANAN-JAZA TENY AMIN’NY PORT : Efa any am-ponja vonjimaika ilay tovolahy
Natolotra ny fampanoavana ny talata teo ilay tovolahy tratra saika nanolana zazavavikely 5 taona ny alatsinainy teo. 22 août 2019
Notazomina tao amin’ny brigadin’ny port izy ary natao fanadihadiana nialoha ny nanolorana azy ny fampanoavana. Raha tsiahivina dia efa nesorin’ity tovolahy ity tanteraka ny akanjon’ilay zazavavikely ary efa niboridana koa izy hanampatra ny filan-dratsiny amin’ity voatavo tsy mifandraka no tratry ny fokonolona. Soa ihany fa nisy nahita satria rehefa nentina tany amin’ny dokotera natao fizahana ilay zaza dia mbola tsy tanteraka ny habibian’ity tovolahy ity.
Na izany aza dia mendrika ny hosaziana faran’izay mafy izy satria dia zazakely no saika hosimbainy tanteraka. Manafatra ny ray aman-dreny mba ho mailo sy hitandrina hatrany ny kaomandin’ny brigadin’ny port. Tsy kely lalana ny ratsy, hoy izy satria variana dimy minitra nanaraka entana ny ray aman-drenin’ilay zaza no nohararaotin’ity bibiolona ity. Manjaka ny fanararaotana ara-nofo amin’ny zaza tsy ampy taona izao ka tokony ho samy hanara-maso tsara ny zanany ny ray aman-dreny tsirairay. Tokony handray andraikitra fa ho hentitra ihany koa ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ka hanasazy sy hanafay ireo mpanolan-jaza ireo.